COVID-19 sy hantsana nomerika anatin’ny rafitra fampianarana ao Trinidad & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Tokony handray anjara amin'ny fanapahankevitra ireo mpianatra
Voadika ny 19 Jona 2020 16:51 GMT
Efitrano fianarana amin'ny hoavy. Sary nopihan'i Chris Gebert, nampiasàna lisansa CC-BY-NC-2.0.
(Raha tsy asiana fanamarihana manokana, mankany amin'ny teny anglisy daholo ny rohy ato anaty lahatsoratra.)
Ny 16 Martsa 2020, herinandro talohan'ny nampiharany ny fepetra mifanaraka amin'ny fombany manokana momba ny fihibohana mba hiadiana amin'ny fiparitahan'ny COVID-19, namoaka didy manakatona ny toeram-pianarana rehetra ny governemanta ao Trinidad.
Amin'ny ankapobeny, afaka nanohy ny fampianarana ireo oniversite sy toerana fianarana ambony ary nampianatra sy nampanao fanadinana tety anaty aterineto. Kanefa, tany amin'ny sekoly marobe ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa fototra, nabaribarin'io toedraharaha io ny hantsana nomerika sy ny filàna fanofànana fototra momba ny nomerika ao Trinidad & Tobago.
Raha mitaha amin'ny firenena hafa mpikambana ao anatin'ny Fiombonamben'ireo ao Karaiba (CARICOM) [fr], toa mba tsara toerana ihany ny tontolo nomerika ao Trinidad &Tobago mba hahafahana miditra amin'ny fampianarana ampitaina amin'ny aterineto. Tamin'ny Desambra 2018, novinaina ho 77% ny fahafahan'ny vahoaka miditra amin'ny aterineto. Na izany aza, efa ho roapolo taona lasa izao, nisy fampiasambola goavana natao ho an'ny fitomboan'ireo fotodrafitrasa nomerika sy ny tolotra ho an'ny daholobe ety anaty aterineto, avy amin'ny fanjakana sy ny fanohanan'ireo masoivoho ho an'ny fampandrosoana.
Kanefa, mbola taraiky ihany ny rafi-pampianarantsika. Tamin'ny Jona 2019, nambaran'i Anthony Garcia, Minisitry ny Fampianarana, fa ho ampahafantarin'i Trinidad & Tobago amin'ny Filankevitry ny Fanadinana any Karaiba sy ny Birao Foben'ny Fanadinana ao anivon'ny CARICOM fa tsy mbola ho vonona amin'ilay fanovàna narafitra ho an'ny taona 2020 i Trinidad & Tobago. Ny tanjona dia ny hanomana ilay rafitra fampianarana hiditra amin'ny tetezamita ho amin'ny taona 2021.
Hatreto ny fahatongavan'ny valanaretina COVID-19 dia nanafaingana ireo ezaka sy ny hamehana hikisahana mankany amin'ny fampianarana, fandalinana ary fanombànana atao ety anaty aterineto. Fa kosa, izay tsy hiova mora foana, dia ireo tsy fitoviana sôsialy sy jeografika misy ao Trinidad & Tobago ary ny « hantsana nomerika » mifamatotra aminy. Ny hoe hantsana nomerika dia voambolana ampiasain'ireo avy any amin'ny anjerimanontolo sy ireo olona hafa mba hanondroana ny fidirana tsy mitovy amin'ny teknolojian'ny fampahalalambaovao ary ny fifandraisandavitra.
Mandra-pijerintsika ny tena zavamisy atrehan'ireo mpampianatra sy ireo mpianatra, toa manjavozavo ny fotokevitra mikasika ny hantsana nomerika. Nitafa tamin'ireo mpampianatra eny amin'ny ambaratonga faharoa fototra aho, izay ankizy eo amin'ny 15 -16 taona eo no ampianariny. Tao amin'ny toeram-pianarana ambaratonga faharoa ao amin'ny faritr'i Caroni, distrika iray ao amin'ny faritra afovoan'i Trinidad, valo amin'ny ankizy 15 amin'ny kilasy A iray mianatra ny teny anglisy no tsy manana solosaina finday ka tsy afaka niditra tamin'ny aterineto. Namorona vondrona WhatsApp iray ilay ramatoa mpampianatra mba hifampiresahana amin'ireo mpianany. Nalefany tamin'ny imailaka ho an'ilay vondrona ny fanazàrana hiatrehana ny fanadinana. Herinandro iray taty aoriana, ankizy roa monja no naharaisany valiny.
Toy izay ihany, ramatoa iray mpampianatra amin'ny ambaratonga faharoa ao amin'ny Seranan'i Espaina, renivohitr'i Trinidad & Tobago no nilaza fa efatra monja amin'ireo mpianany 20 no mba mifandray tsy tapaka aminy. Ambany ny tahan'ny fandraisana anjara ary sarotra ny fifaneraserana amin'ireo mpianatra any amin'ireo toerampianarana mandray ankizy marobe avy amin'ny sokajin'ny sahirana ara-pivelomana. Na izany aza, afaka namorona vondrompiarahamonina virtoaly tena mavitrika ny sasany tamin'ireo mpampianatra mba ho fitaovana hampianarana, handalinana ny teny anglisy sy ny matematika, hetsika iray toa mivoaka amin'ny mahazatra.
Fanamby marobe no atrehana raha te-hianatra ka tsy maintsy hitety ny aterineto. Ankoatry ny lentam-pahalalàn'ny ankizy, mipetraka koa ny resaka fahafahana miditra amin'ireo fitaovana sy ny teknolojia ilaina mifanaraka amin'izany. Samihafa amin'ny fifanatrehana mivantana ny fifaneraseran'ireo mpampianatra sy ny mpianatra eny anivon'ny habaka nomerika. Io fifaneraserana io dia miankina koa amin'ny lentan'ny kolontsaina nomerika ananan'ny andaniny sy ny ankilany. Samy ilaina amin'ny fanarahana fiofànana « ara-dalàna » ety anaty tambajotra na ny fahaizamanao, na ny fahatokisana. Mba haharesy lahatra momba izany, ilaina ny mangataka izany amin'ny iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny antenimiera na mpanolotsaim-paritra ao amin'ny governemanta nanohana ireo olompirenena tamin'ny fangatahan-dry zareo tolotra ho an'ny daholobe ety anaty tambajotra.
Mba hamenoana ilay fahabangan'ny fiofanana nomerika feno amin'io sehatra io, nisy ny fanatrehan'ireo mpampianatra avy amin'ny sekolim-panjakana ao Trinidad & Tobago ny atrikasa fohy sy fitarihan-dàlana tety anaty aterineto, natao ho fanohanana an'ilay tetezamita tamin'ny alàlanà fepetra maro sahaza noraisina tanatin'ny hamehana. Koa satria sarotra ny hanamarina ny fandraisana anjaran'ireo mpianatra amin'ireo fampianarana ampitaina amin'ny aterineto, amin'ny alàlan'ny telefaona no atao ny ankamaroan'ireo fampianarana sy fifandraisana iarahana amin'ireo ankizy. Amin'ny tranga sasany, lasa hoe “fampianarana amin'ny telefaona” ireo « fampianarana atao amin'ny aterineto » satria vondrona WhatsApp no ampiasain'ireo mpampianatra, ary mandalo aminà antso ataony amin'ny telefaonany manokana mankany amin'ireo mpianany. Misy fiantraikany eo amin'izay eritreretintsika ho fampianarana mahomby atao amin'ny aterineto io fomba io. Ankoatry ny fitomboan'ny ora ambony ampanga, tsy maintsy asa fanampiny takiana amin'ireo mpampianatra ihany koa ny fandrisihana ny ankizy handray anjara.
Samy nidera ny teknolojian'ny fampianarana daholo ireo governemanta nifandimby tao Trinidad & Tobago. Tsy dia nitondra ireo fiovàna goavana tamin'ny fomba fampianarana sy ny fitondrantena araka izay nambara akory ilay fandaharanasa nataon'ny ministeran'ny fampianarana nizaràna solosaina finday tany amin'ireo sekoly, ary hetsika natomboky ny fitantanana nifanome tànana tamin'ny vahoaka tamin'ny 2010. Nasehon'ireo fandalinana nanaovana tombana ny fandaharanasa [pdf] fa betsaka ny zavatra andrasan'ireo mpianatra sy mpampianatra amin'ny fampiasàna azo atao amin'ilay solosaina rehefa any an'efitrano fiaarana. Ary koa, ny ho fahombiazan'io fandaharanasa io dia miankina betsaka amin'ny fahazaran'ny sekoly tsairairay, fa tsy amin'izay mety ho tombontsoa azo sintonina amin'ny fanànana azy manokana.
Kanefa, ny tanjon'io fandaharanasa io tamin'izany dia ny hametraka ny tsindrimpeo amin'ny zara fa fahafahana mahazo an'ireo teknolojian'ny fampahalalambaovao sy ny fifandraisana (TIC) any amin'ireo toeram-panabezaana ambaratonga faharoa fototra. Tanjona iray hafa ny hamaliana ny filàna manome fitaovana ho entina manamora izay fidirana izay. Tamin'ny 2016, ny fitantanan'ny Hetsika Nasiônalin'ny Vahoaka dia nampiato ny fanapariahana ireo solosaina finday fa kosa naka fomba firoso iray mankamin'ny fanamafisana ny fahaizamanaon'ireo sekoly momba ny TIC.
Fahiny aho dia nitsikera ampahibemaso ny fampiasana solosaina finday tamin'ny fandaharanasa fampianarana, noho ny tsy fahavitàny miatrika ireo olan'ny kolontsaina nomerika sy ny tsy fahavitàny mamorona votoaty mifanaraka tsara amin'ny fomba fampianarana ampiasàna ny nomerika. Efa niova ny fomba fijeriko hatreto. Ankehitriny, ankasitrahako ny fampiasàna faobe ny TIC any anaty rafitra fampianarana nasiam-panavaozana, izay manome ihany koa solosaina finday ho an'ireo mpianatra. Mety ho vitan'ny COVID-19 koa ve ny hanetsika ny fijoroana ara-politikan'ny fitondrana amperiasa?
Nambaran'ireo mpampianatra sy talen-tsekoly ihany koa ny filàna manome tolotra ho fanohanana ny ankizy manana fahasembanana ara-batana sy fahasarotana amin'ny fianarana. Notsipihan-dry zareo ihany koa ny filàna miditra an-tsehatra eny anivon'ny fianakaviana izay misy fifandirana henjana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Marobe ireo ankzy ao Trinidad & Tobago no miatrika rarintsaina avo be eny anivon'ny ankohonana sy ny vondrompiarahamonina misy azy ireo. Miaraka aminà fepetra vaovao, marobe ireo tanora voatery miahy ireo zandrikelin-dry zareo, ary tsy adino amin'izany ny fitantanana ny filàna ara-panabeazana efa azy ireo manokana. Ny fitsinjaràna tsy mitovy ny asa dia mazàna mitarika mankany amin'ny hoe lasa anjaran'ny vehivavy sy ny ankizy vavy ny raharaha.
Ny fiampangàna ny fanjakana ho nanao tsinontsinona ny andraikiny maha-mpanabe ny vahoaka azy nandritra io krizy io dia mety ho tsy fahafantarana ilay setry manandanja atao amin'ny hamehana sy ny vonjitaitra entina ho an'ny vahoaka hatramin'ny nikatonan'ireo sekoly. Nahazendna ny fanisahana malaky be ny sakafo avy amin'ilay fandaharanasa ho lasa any amin'ny rafitra karatra vonjimaika omena ireo ray aman-dreny, araka ny filàn'izy ireo.
Saingy fanamby iray goavana be no natrehan'ireo minisitra ao anatin'ny governemanta sy ireo mpiasampanjakana. Nisy tafa iray ho an'ny mpanao gazety natao tamin'ny 14 Aprily 2020 nampiseho ampahany tamin'ny tontolon'ny zavamisy sarotra izay tsy maintsy iasàn-dry zareo mba hitohizan'ireo « hetsika ara-panabeazana tena ilaina ». Izany dia mampiseho ihany koa ny fisokafan'izy ireo amin'ny famaliana ireo fanontaniana momba ny datin'androm-panadinana eo an-toerana sy manerana ny faritra.
Fa ny tsy reko nandritra ilay tafa dia ny fanekena ny maha-zavadehibe ireo ankizy ao anatin'ilay raharaha sy ny fandraisana fanapahankevitra. Ireo ankizy mpianatra any amin'ny sekolim-panjakana, ireo fikambanan'y mpianatra, ireo mpianatra « mpampiasa » nomerika dia tokony nandray anjara tamin'ilay fanapahankevitra noraisina tamin'ny anaran-dry zareo sy hanefy ny hoavin'izy ireo.
Pikantsary avy ao amin'ny vovonan'ny fampianarana atao amin'ny aterineto, vao avy noforonin'ny ministeran'ny fanabeazana ao Trinidad & Tobago.
Na ho antsointsika hoe krizy, na zavadoza ny toedraharaha iainantsika amin'izao fotoana izao, ny tena ho ilaina betsaka aoriana ao, dia ny fiverenana amin'ny andavanandrom-piainana sy famerenana mandrafitra indray ny rafitra fampianarana. Ny fanaovana an-jorom-bàla ny mpianatra ao anatin'ny adihevitra dia famelàna azy ireo ho tratra aoriana. Ireo zavanianana sy ny vinan'ny ankizy amin'ny antanan-tohatra rehetra ao anatin'ny rafitry ny fampianarana dia tokony hisy fiantraikany amin'ny setry sy ny famantarana « vahaolana » iray hahafahana manatsara ny rafitra fampianarana. Isika tsy maniry toedraharaha iray hoe lasa loza mitatao be mihoatra noho ny COVID-19 ny fanilikilihana ireo mpianatra. Ho amin'izay zotra izay indrindra no nilazan'ilay poeta goianey Martin Carter hoe: « Samy voakitika daholo isika rehetra! Samy ringana daholo! »
Avy hatrany taorian'ilay tafa ho an'ny gazety nataon'ny ministeran'ny fanabeazana tamin'ny 14 Aprily, roa ny antso an-telefaona voaraiko. Avy aminà ray aman-dreninà mpianatra ilay faharoa, izay nanontany tena raha toa ka misy dikany ny hamoahana vola hanaovana fampianarana manokana (cours particuliers) ataon'ireo mpampianatra any amin'ny ambaratonga fototra ho an'ireo zanany, mahatratra hatramin'ny 300 dolara (54 dolara amerikàna) isankerinandro. Ny tolotra naroso an'ilay ray aman-dreny dia ahitàna ihany koa antso roa fifampiresahana mifanatri-tava amin'ny WhatsApp.
Raha ny momba ilay antso voalohany indray, avy aminà mpianatra iray eny amin'ny lisea izay nampita tamiko kiana iray momba ny firindra sy ny votoaty ao amin'ilay vovonan'ny fampianarana atao amin'ny aterneto vao avy noforonin'ny ministera. Ireo olona nanaiky ny hanaovan'ireo politisiàna tombana an'ilay vovonana dia tsy maintsy koa misoratra anarana ary misintona ny famintinana nataon-dry zareo manokana. Angamba avy eo ry zareo vao afaka manomboka manavaka ny tena zavamisy sy ny atao hoe fifandraisana amin'ny daholobe.